Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Ceydiid Ilko Xanaf'' Waxaan ku laabanayaa Deegaanada Maamulka Somaliland Hadii la ii diido....
August 22 2017 00:50:37
Ceydiid Ilko Xanaf'' Waxaan ku laabanayaa Deegaanada Maamulka Somaliland Hadii la ii diido....
Guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka Abuukaate Ceydiid Cabdullaahi Ilko Xanaf, oo Warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay doorashada Xubnaha Aqalka sare ku matalaya gobolada Waqooyi ee Soomaaliya.
Waxa uu sheegay Ceydiid Ilko Xanaf in uu dib ugu laabanayo deegaanada Maamulka Somaliland uu kasoo jeedo hadii loo diido in uu isku soo sharaxo in uu kamid noqdo Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Ilka-Xanaf,waxaa uu ku dooday in laga hor istaagay in uu u tartamo kuraasta labada aqalka ee dalka,waxaan uu sheegay in uu go’aansaday in uu ku laabto Carruurtiisa sida uu sheegay ee deggan Hargeysa.
''Waxaa ii muuqda fara galin lagu hayo xubnaha Aqalka sare ku matalaya gobolada Waqooyi, madaxda dowlada ayaa si gaar ah ula doonaya kuraastaasi siyaasiyiin ay si gaar ah u wataan, hadii la ii diido in ana isku soo sharaxo labada Aqaal waxaan ku laabanayaa Somaliland ay caruurteeda joogaan '' Ayuu yiri Ilko Xanaf.
Gudoomiyihii hore ee Maxkamada sare ee dalka Abuukaate Ceydiid Ilko Xanaf ayaa cadaadis xoogan kala kulmaya madaxda sare ee dalka kuwaa oo la sheegay in ay ka ilaalinayaan in uu mar kale kasoo dhax muuqdo siyaasada Soomaaliya.
Abuukaate Ceydiid Ilko Xanaf ayaa Baarlamanaka Soomaaliya kusoo dhax jiray sanado badan, waxa uuna mudooyinkii ugu dambeeyay ahaa Gudoomiyaha Maxkamada sare ee dalka, waxa uuna kamid ahaa Siyaasiyiinta saameynta badan ee kasoo jeeda gobolada Waqooyi.
· mamaan on January 10 2017 ·